လျှပ်စစ်မော်တာ - Ikkaro
စတင်ပြုလုပ်ခြင်း >> အင်ဂျင် >> လျှပ်စစ်မော်တာများ
၎င်းသည်အသွင်ပြောင်းသော rotary device တစ်ခုဖြစ်သည် လျှပ်စစ်ပါဝါ en စက်မှုစွမ်းအင်.
Synchronous စက်များနှင့် မော်တာများ
၏ပုံ Jorts များ
၎င်းတို့သည် ပေးထားသော တိုင်အရေအတွက်အတွက် မြန်နှုန်းထူးခြားပြီး ကွန်ရက်ကြိမ်နှုန်းဖြင့် ဆုံးဖြတ်သည့် စက်များဖြစ်သည်။ ကြိမ်နှုန်းသည် အချိန်ယူနစ်တစ်ခုလျှင် သံသရာအရေအတွက်ဖြစ်သည်။ ကွင်းတစ်ခုစီသည် မြောက်ဝင်ရိုးစွန်းနှင့် တောင်ဝင်ရိုးစွန်းကို ဖြတ်သန်းသည်။
ဥရောပနှင့် ကမ္ဘာ့နိုင်ငံအများစုတွင် စက်မှုကွန်ရက်များ၏ ကြိမ်နှုန်းမှာ 50Hz ဖြစ်ပြီး အမေရိကန်နှင့် အခြားနိုင်ငံအချို့တွင် 60Hz ဖြစ်သည်)
၎င်းသည် ဂျင်နရေတာအဖြစ် အလုပ်လုပ်သောအခါ၊ စက်၏အမြန်နှုန်းသည် လုံးဝမတည်မြဲနေရမည်ဖြစ်သည်။
Electrostatic Generators- Static Electricity ၏သမိုင်း
သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာ၏သမိုင်းသည် ရှာဖွေတွေ့ရှိမှုများနှင့် တိုးတက်မှုများ၏ စဉ်ဆက်မပြတ် ပြောင်းလဲတိုးတက်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဤအရာ၏ ကြီးမားသော ဥပမာမှာ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားသုံး စက်များ သို့မဟုတ် ဂျင်နရေတာများဖြစ်သည်။ ဤစာစီစာကုံးတိုလေးတွင် လျှပ်စစ်ဓာတ်အား၏သမိုင်းကြောင်းကို အချိန်နှင့် တပြေးညီကြည့်ရှုနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ Electrostatics နှင့် ၎င်းတို့၏ နည်းပညာဆိုင်ရာ အသုံးချမှုများနှင့် ပတ်သက်သည့် ရှာဖွေတွေ့ရှိမှုများအထူးသဖြင့် ပယင်းကို ပွတ်တိုက်ခြင်းသည် အရာဝတ္တုအချို့ကို စွဲဆောင်ကြောင်း တွေ့ရှိခဲ့သဖြင့် ဂျင်နရေတာပုံစံဖြင့် သင်ကြားရေးနှင့် အပန်းဖြေစရာ ရူပဗေဒဂိမ်းများအတွက် အသုံးပြုသည့် ခေတ်အမီဆုံး ဂျင်နရေတာများပင်လျှင် အဘယ်ကြောင့်နည်း။
Electrostatic Generator သည် မြင့်မားသောဗို့အားများကို ထုတ်ပေးနိုင်သော်လည်း အလွန်သေးငယ်သော လျှပ်စီးကြောင်းများဖြင့် ထုတ်ပေးနိုင်သည်။. ၎င်းတို့သည် အရာဝတ္ထုနှစ်ခုတွင် ပွတ်တိုက်မှုရရှိရန် ပံ့ပိုးပေးရမည့် စက်စွမ်းအင်မှ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုသည် အပူအဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲသွားပြီး နောက်တစ်ခုအား လျှပ်စစ်ဓာတ်စွမ်းအင်အဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲသွားသော ပွတ်တိုက်မှုအပေါ် အခြေခံထားသည်။
အ 775 မော်တာကိုတိုက်ရိုက်လက်ရှိမော်တာဖြစ်ကြသည် စီမံကိန်းတော်တော်များများမှာသုံးပြီးလူတွေကိုသိပ်ပြီးမသိကြဘူးထင်တယ်။
ဒီအင်ဂျင်အမျိုးအစားတွေအကြောင်းပြောတဲ့အခါ အဆိုပါ 775 စံသောမော်တာအရွယ်အစားကိုရည်ညွှန်းသည်။ ဤနည်းအားဖြင့်မတူညီသောကုန်အမှတ်တံဆိပ်များမှထုတ်လုပ်သော ၇၇၅ ခု၊ မတူညီသောလည်ပတ်မှု voltages နှင့်ကွဲပြားခြားနားသောစွမ်းအားများ၊ bearings 775 set နှင့် or two နှစ်ခုဖြင့်တွေ့ရှိနိုင်သည်။ လူတိုင်းရိုသေလေးစားခြင်းသည်အင်ဂျင်အရွယ်ဖြစ်သည်။
လျှပ်စစ်မော်တာများသည် ၎င်းတို့၏ ထိန်းချုပ်မှုနှင့် ကာကွယ်မှုကို ပိုမိုကောင်းမွန်စေသည်။
အဟောင်း Schneider လျှပ်စစ်စာကြည့်တိုက် သူတို့ရဲ့ ဝဘ်ဆိုဒ်ဟောင်း ပျောက်ကွယ်သွားပေမယ့် အဲဒီမှာ ရှိခဲ့တဲ့ စာရွက်စာတမ်းတွေနဲ့ သူတို့ ဆက်ထည့်ထားတဲ့ အပိုင်းကို ရှာတွေ့နိုင်ပါတယ်။ သင့်ဝဘ်ဆိုဒ်မှ ဒေါင်းလုဒ်များ.
လျှပ်စစ်၊ အီလက်ထရွန်းနစ်နှင့် အလိုအလျောက်စနစ်ဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို ရှာဖွေရန် ဤဝဘ်ဆိုက်သည် အလွန်ကောင်းမွန်သော အရင်းအမြစ်တစ်ခုဖြစ်သောကြောင့် ဤဝဘ်ဆိုက်ကို ချီးကျူးလိုပါသည်။ အားလုံးကို ဂုဏ်သိက္ခာရှိသော လုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များနှင့် ဆရာများက ပြင်ဆင်ပေးသည်။
El Mendocino အင်ဂျင် တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ် လျှပ်စစ်မော်တာ ၎င်းသည်နေစွမ်းအင်ကိုသံလိုက်ထုတ်လွှတ်ပြီးအသုံးပြုသည်။ အင်ဂျင်၏လှပမှုသည်လေထဲတွင်မျောနေစဉ်တွင်လည်ပတ်နေသည်ကိုကြည့်နေသည်။ ဒါဟာတကယ်မှော်နဲ့တူလှပါတယ်။
မတူညီသောအပိုင်းနှစ်ပိုင်းဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားခြင်းဖြစ်ပြီး၎င်းကို levitate ပြုလုပ်သောသံလိုက်စနစ်နှင့်၎င်းကိုလှည့်စေသောလျှပ်စစ်သံလိုက်အစိတ်အပိုင်းများဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသည်။ မော်တာသည်မျက်နှာပြင်လေးမျက်နှာပြင် (စတုရန်းမိုင်) ရှိပြီး rotor ကိုဖွဲ့စည်းသည်။ ရဟတ်ဘောင်တွင်ကွိုင်နှစ်ခုစီရှိပြီးတစ်ဖက်စီတွင်နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်တစ်ခုပါရှိသည်။ ရိုးတံအလျားလိုက်ဖြစ်ပြီးအဆုံးသတ်တစ်ခုစီတွင်သံလိုက်ရှိသည်။
နောက်ဆုံးအဆင့်မော်တာတစ်ခုတည်ဆောက်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်သောနောက်ဆုံးဆောင်းပါးအပြီးတွင်ကျွန်ုပ်သည်ဆွဲထားရန်အလွန်စိတ် ၀ င်စားသည်။ အပေါ် Read
ငါသူတို့ပြသဘယ်မှာက်ဘ်ဆိုက်တွေ့ပြီ ရိုးရိုး single phase ac motor ကိုဘယ်လိုတည်ဆောက်ရမလဲ။ ငါအလေးပေးရန်အရေးကြီးသည်ထင်တအဆင့်သာနှင့်အတူအလုပ်လုပ်တယ်။
အင်ဂျင်ကိုအလွယ်တကူရှာဖွေနိုင်ပြီးဖွံ့ဖြိုးအောင်ပြုလုပ်ထားသောပစ္စည်းများဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည် စက် အစကတည်းက လျှပ်စစ်ဓာတ်အား၏သီအိုရီအခြေစိုက်စခန်း နှင့် လျှပ်စစ်မော်တာ.
ငါကောလိပ်ကျောင်းမှာငါစတင်ခဲ့သည့်အခါမှတ်မိသေးတယ် လျှပ်စစ်စက်တွေလေ့လာသူတို့ကကျွန်တော်တို့ကိုစသင်ပေးတယ် စံပြတစ်ခုတည်းအလှည့်မော်တာ။ ဒီကနေစပြီးသူတို့ဟာအင်ဂျင်အမျိုးမျိုးကိုရလာတဲ့အထိပိုပိုပြီးဖွံ့ဖြိုးလာခဲ့ပေမယ့်အမြဲတမ်းတူညီတဲ့အခြေခံပေါ်မှာအခြေခံထားတယ်။
ရိုးရှင်းသော homopolar မော်တာတည်ဆောက်ခြင်း
ဒီမှာဒီမှာဘက်ထရီ၊ ဝါယာကြိုးတစ်ချောင်းနဲ့သံလိုက်ပါတဲ့ရိုးရှင်းတဲ့ homopolar မော်တာကိုဘယ်လိုတည်ဆောက်ရမယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ခဲ့တယ်။ The … အပေါ် Read